मार्क्सवाद लेनिनवादको विकसित भएको मार्क्सवाद हो जबज : पोखरेल | Matrisandesh
एकताको पछिल्लो प्रगतिबारे एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग कुराकानी :-
पार्टी एकता टुंगिनै लागेको हो कि जस्तो गरेर समाचार आइरहेका छन्,अब कुरा मिलिसकेको हो ?
अखबार र अरु सञ्चारमाध्यममा जुन समाचार आए, ती समाचारलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । जति कुरा बाँकी छन्, ती कुरा आएका छैनन् । म ०७४ असोज १७ देखि सबै प्रक्रियामा छु । हामीले असोज १७ गते तालमेल र एकता भन्यौं । सिट बाँडफाँट र घोषणापत्र कार्यदल बनायौं ।
हामीले पछिल्लो अवस्थामा पनि राष्ट्रियसभा र प्रदेशको बाँडफाँटमा पनि कार्यदल बनायौं । यी सबै कार्यदलले राम्रो काम गरेर टुंगो लगाएको अनुभव पनि छ । अहिले पनि हामीले घोषणापत्रमा आधारित रहेर सरकारले शुरुदेखि गर्नुपर्ने काम के हो, त्यसलाई सूत्रबद्ध गर्न अर्को कायदल बनाएका छौं ।
अब हामीले एकताको सन्दर्भमा विचार र संगठनको क्षेत्रमा साझा अवधारणा बनाउन बाँकी छ । विचारको मामिलामा हाम्रो साझा समझदारी हुनुपर्छ । अर्को कुरा, संगठनात्मक व्यवस्थापन मिलाउनुपर्नेछ ।
होइन, हामीले विचार र सिद्धान्तको कुरा होइन,अध्यक्ष पदको कुरा कसरी मिल्दैछ भनेर सोध्न खोजेको हो, त्यो मिलिसकेको होइन र ?
शीर्षतहको नेतृत्वको मात्र कुरा होइन । अहिले चाहिँ अध्यक्ष को हुने भन्ने मात्र कुरा आयो । तर, माथिको पद कसरी जिम्मेवारी व्यवस्थित गर्ने ? निर्णय गर्ने संयन्त्र कस्तो बनाउने ? तल्ला कमिटी कसरी व्यवस्थित गर्ने ? पार्टी सदस्यको विधि के बनाउने ? यसमा छलफल भइरहेको छ ।
यो सबै कामका लागि अन्तरिम विधान बनाउनुपर्नेछ । महाधिवेशनपछि त एउटा विधान आउँछ तर, त्यसअघि पार्टी चलाउने अन्तरिम विधानको कुरा छ माओवादीको ४ हजार सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ, एमालेको २ सयको छ । त्यो कसरी मिलाउने ? यसमा छलफल हुन बाँकी छ ।
जस्तो- माओवादीको ४ हजार सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ, एमालेको २ सयको छ । त्यो कसरी मिलाउने ? यसमा छलफल हुन बाँकी छ । विचार र संगठनको मामिलामा हामीले कमन फुटिङ निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
फेरि पनि मैले सोध्न खोजेको चाहिँ के भने दुई नेताबीच कुरा मिलेको हो ?
सञ्चारमाध्यमहरुमा आशालाग्दो ढंगले कुराहरु आएका छन् । जनताको भावना एकता होस भन्नेमै छ । त्यसैले यी समाचारलाई हामी सकारात्मक रुपमा लिन्छौं । तर, हाम्रा नेताहरु अहिले पनि ‘वान टु वान’ छलफलमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई यो अधिकार पनि कमिटीले नै दिएको हो ।
‘वान टु वान’ भइरहेका कुराहरुमा सकारात्मक प्रगति भएको छ । यो कसैले दिने र लिने कुरा होइन । हामीले एमाले भएर सोच्दैनौं र पुष्पकमल दाहालसहितका माओवादी साथीहरुले पनि अब माओवादी भएर सोच्नुहुँदैन । यो पाए हुन्छ नपाए हुँदैन भन्ने सोचमा अब रहनुहुँदैन । अब त नो मोर एमाले, नो मोर माओवादी अर्थात नयाँ पार्टी बन्ने हो ।
पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद आलोपालो गर्ने सहमति भएको हो ?
आलोपालो भन्ने कुरा पार्टी एकतापछि हुँदैन । पार्टी एकता नहुन्जेल प्रस्तुत गरिने समाधान एउटा हुन्छ । पार्टी एकतापछि नेताहरुको कार्य विभाजन हुन्छ । कुन नेतालाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय हुन्छ त्यो बेला । जब पार्टी एकता गर्दैछौं भने दुवै पार्टीका नेताको जिम्मेवारी पार्टीले तोक्छ ।
अहिले प्रचण्ड पार्टीको एउटा सम्मानित नेता हो, उहाँको उचित व्यवस्थापन हुन्छ । अहिले दुवै अध्यक्षले दिने समाधान हामी सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ । पार्टी एक भइसकेपछि आलोपालो भन्ने हुँदैन । एकतापछि कामको बाँडफाँड हुन्छ, तर आलोपालो हुँदैन ।
यसको मतलब केपी ओली पाँच वर्ष पूरै प्रधानमन्त्री बन्ने हो ?
पाँचै वर्ष भन्ने छैन । ५ वर्ष पनि हुनसक्छ, ३ वर्ष पनि हुन सक्छ । त्यो त पार्टीले जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कुरा हो ।हामीले एमाले भएर सोच्दैनौं र पुष्पकमल दाहालसहितका माओवादी साथीहरुले पनि अब माओवादी भएर सोच्नुहुँदैन । यो पाए हुन्छ नपाए हुँदैन भन्ने सोचमा अब रहनुहुँदैन ।
तपाईले चुनाव जितेलगत्तै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति हुनुपर्छ भन्नुभयो, त्यसले गर्दा तपाईलाई कतिपयले पार्टी एकता बिरोधी पनि भने, अहिले पनि तपाई प्रचण्डलाई अध्यक्ष नदिन ओलीमाथि दबाव पार्ने नेताहरुको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ भन्छन्, किन हो ?
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मूलतः हामी दुईवटा अभ्यास गरेर आयौं । एउटा चाहिँ पार्टीमा धेरै नेताहरु हुनुहुन्छ,उहाँहरुलाई जिम्मेवारी दिने र बहुकेन्द्रको अभ्यास गर्ने । अर्को चाहिँ संस्थागत निर्णय गर्ने, नेताहरुको कार्यविभाजन गर्ने तर बहुकेन्द्र नराख्ने, बरु मुख्य नेताको अवधि तोक्ने ।
दुवै अभ्यासका राम्रा र नराम्रा पक्ष छन । तर, मलाई व्यक्तिगत रुपमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी चलाउने हो भने मल्टिसेन्टर होइन युनिसेन्टर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
संस्थागत निर्णयको पालना र योग्यता अनुसार सबै नेताहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनुपर्छ, तर बहुकेन्द्र हुनुहुन्न । एमालेभित्र आफ्नै पनि अनुभव छन् ।
तर, अहिले एमाले र माओवादी बीचमा एकताको कुरा गरिरहँदा नयाँ ढंगले पनि जान सक्छौं । अध्यक्ष मण्डल, को-चेयरमेनसिपको कुरामा पनि छलफल भइरहेको छ । हामी दुवैखाले मोडलको छलफलमा छौं ।
अध्यक्ष केपी ओलीसँग तपाईहरुले छलफल पनि गर्नुभयो, तत्कालै आजभोलि नै पार्टी एकताबारे कुनै न कुनै सन्देश आउला ?
उहाँले प्रचण्डसँग भइरहेका कुराकानीको बारेमा हामीलाई ब्रिफ गर्नुभयो । हामीले आफ्ना कुरा राखेका छौं । एकता आवश्यक छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता भनेको बिचार र संगठात्मक कुरालाई टुंग्याउनुपर्छ । अहिले गरिहालौं, अरु कुरा पछि मिलाउँला भनेर एकता गर्नु हुँदैन । भावनात्मक कुरा गरेमात्र हुँदैन ।
दुवैजना अध्यक्ष रहने कुरा भएको हो ?
अध्यक्ष स्तरमा कुरा भइरहेको छ । अध्यक्ष भइसकेपछि पार्टीको प्रमुख नेता हुन्छ । पार्टीको प्रमुख दुईजना भनेपछि कसको हस्ताक्षरबाट चलाउने ? आधिकारिक को हो ? पत्राचारकै कुरा आउँछ ।
हरेक बैठकपिच्छे अलग-अलग अध्यक्षता गर्छौं भन्दा भोलि वैधानिकताको कुरा पनि आउँछ । व्यवहारिक पाटोबाट पनि हेर्नुपर्छ भनेका छौं पार्टी एक भइसकेपछि आलोपालो भन्ने हुँदैन । एकतापछि कामको बाँडफाँट हुन्छ, तर आलोपालो हुँदैन ।
एमालेभित्रैबाट प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिएर भने पनि एक्ता गरिहालौं भन्ने हुटहुटी पनि आइरहेको छ नि ?
एमालेभित्र अनौपचारिक रुपमा कसले कहाँ बोल्नुहुन्छ थाहा छैन । तर पार्टीमा प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिनुपर्छ भन्नेमा कसैले भनेको छैन । एकता हुनुपर्छ भन्नेबाहेक पद दिने र लिने कुरा भएको छैन ।
एउटा कुरा बताउनुस् कि,पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा कहिले हुन्छ ? सरकार गठनअघि केही आउँदैन ?
यो चाहिँ दुवै पार्टीका अध्यक्षहरुले गर्नुभएको संवाद र निकाल्नुभएको निश्कर्षमा भर पर्छ । उहाँहरुबीच संवाद र छलफल जारी नै छ । सरकार गठन र पार्टी एकता फरक कुरा हुन् । पार्टी एकता गर्छौं भनेर हामीले मेसेज गरिसकेका छौं । पार्टी एकता संयोजन समिति बैठकमा उहाँहरुले आफ्नो कुरा राख्नुहोला ।
पार्टी एकता आवेगमा होइन, प्रक्रिया अनुसार हुने कुरा हो । एकताका सन्र्भमा स्टेप-स्टेप मिलाएर आएका छौं अहिलेसम्म । घोषणापत्र एउटा स्टेप थियो, सिट बाँडफाँट अर्को स्टेप थियो, चुनाव जित्यौं । निकै कठिन प्रक्रिया हामीले पार गर्दै आयौं । राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकारको बाँडफाँट मिलायौं । अब पनि यस्तै ‘स्टेपवाइज’ एकता हुने हो ।
नेतृत्वको सन्दर्भमा अझै दुई नेताबीच मन मिल्न बाँकी देखियो होइन त ?
मूल कुरो, उहाँहरु दुईजना अध्यक्षको कुरा कस्तो निश्कर्षमा पुग्छ, त्यसमा भर पर्छ । अध्यक्ष मण्डलको हिसाबले पनि जान सक्छ । को- चेयरमेनशिपको हिसाबले पनि जान सकछ । निश्चित अवधि तोकेर अध्यक्ष हुने कुरा पनि आन्तरिक समझदारी हुन सक्छ ।
उहाँहरुले निकाल्ने निश्कर्ष हामीलाई मञ्जुर छ भन्ने म्याण्डेट दिइसकेका छौं ।
नेताको व्यवस्थापनपछि अब तलका कमिटीहरुको एकता चाहिँ कसरी हुन्छ ? ७०/३० को अनुपातमै कमिटीहरु बन्ने हुन् ?
हामीले धेरै पक्षलाई राखेर टुंग्याउनुपर्छ । जनताले दिएको मतलाई ख्याल गर्नुपर्छ । एउटा आधार त जनमत नै हो । योग्यता, क्षमता, पृष्ठभूमि र व्यक्तिको इतिहास पनि हेर्नुपर्छ । हामीले हिजो पनि ठ्याक्कै ६०/४० गरेको होइन । पछि पनि कहीँ ७०/३० भयो, कतै ६५/३५ पनि भयो ।
मैले अहिले नै मलाई लागेको कुरा भन्दा र समाचार सम्प्रेषण गर्दा त रमाइलो होला, तर म जुन ठाउँमा छु, त्यहाँबाट मैले आफ्नो बुझाइ सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । मूल नेतृत्वको कुरा दुई अध्यक्षले टुंग्याउनुहुन्छ, संगठनात्मक एकताका लागि कार्यदल बनाएर टुंग्याइन्छ ।
तपाईले अस्ति एउटा भाषणमा विचार र संगठनका राँटा मिलाउन बाँकी छन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो, संगठनको कुरा त भन्नुभयो, अब विचारको राँटो चाहिँ के हुँदैछ ?
हामीले विचारको कमन फुटिङ बनाउनैपर्छ । व्यवहारमा निश्चित बिन्दूमा टेकिसकेको भए पनि सिद्धान्तमा त्यो व्यक्त हुनुपर्छ । हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनिरहँदा एमाले पार्टी विशेषको पेवा होइन । नेपालको विशिष्ठतामा मार्क्सवाद लेनिनवादको अभ्यास गर्दा विकसित भएको मार्क्स हो जबज भन्छौं हामी ।
माओवादीले भनेको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद पनि हिंसात्मक विद्रोहको कालखण्डबाट संक्रमणको स्टेप जस्तो लाग्छ मलाई । त्यस हिसाबले त्यो सकारात्मक छ । हामीले जबजको कुरा गर्दा एकाएक एमालेले ल्याएको हो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा शुरुवातदेखि यसमा रहेका विचारका भ्रूणहरु विकसित हुँदै जबज भन्ने ठाउँमा पुगेका हो ।अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट प्राप्त भएका सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवको निश्कर्ष यसको दोस्रो स्रोत हो । तेस्रो चाहिँ यसको दार्शनिक र सैद्धान्तिक पक्ष पनि छ । त्यो के भने द्वन्द्व सर्वत्र छ, त्यो प्रकृतिमा छ, मानव समाजमा छ, राजनीतिमा पनि छ । सबै ठाउँका द्वन्द्वलाई विधिसम्मत ढंगले प्रकट हुन दिएन भने त्यसले विष्फोटक रुपमा लिन्छ ।
राजनीतिमा देखिने द्वन्द्वलाई पनि विधिसम्मत ढंगले प्रकट हुन दिनुपर्छ भन्ने कुरा जजबले भन्छ । आज हामीले यसको वकालत गरे पनि यो कुनै वास्तवमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोललनको महत्वपूर्ण बैचारिक निश्कर्ष हो, एमालेको मात्र सिद्धान्त होइन ।
जबज भनेको एमालेको मात्र पेवा विषय हो र त्यसलाई स्वीकार गर्दा एमाले मातहत गएको भन्ने हुन्छ कि भन्ने लाग्छ भने त्यो गलत हो । बरु त्यसको प्रस्तुतिमा, हाम्रो भाषागत सन्दर्भमा केही आपत्ति छ भने छलफल गर्न सकिन्छ । आजको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको यथार्थमा एमाले जबजको प्रवक्ता हो, तर व्यवहारमा हामी सबै त्यही दिशामा आएका छौं ।
जबज कुनै कार्यनीतिक कुरामात्र होइन । अहिलेजस्तो पूँजीवादी क्रान्ति सकियो, समाजवादी क्रान्ति कार्यक्रम लागू गर्ने बेला भन्ने भन्ने सुन्छु । मलाई त हाँस उठ्छ । चीनजस्तो मुलुक, जहाँ त्यस्तो संरचना निर्माण गरेर क्रान्तिको यतिपछि पनि समाजवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेका छौं भन्दैछन् ।
हामीतिर चाहिँ क्रान्तिको कारण सकियो, समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्छौ भन्ने कुरालाई के भन्ने ? अचम्म लाग्छ । जबज त क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि समाजवादी शासन प्रणालीमा पनि लागु हुने विचार हो ।
तर, जबजको चरण सकियो भन्ने बहस त एमालेबाटै शुरु भयो नि ? अब यसको च्याप्टर क्लोज भयो भन्ने कुरा पार्टीकै नेताहरुले भनेका होइनन् र ?
जबजको च्याप्टर क्लोज होइन, च्याप्टर त झन् ओपन हुन्छ । हाम्रो विचार हाम्रो कार्यक्रम के हो त यतिबेला ? कि समाजवादी कार्यक्रम हो ? हामीले कार्यक्रमको नामकरण गर्नुपर्‍यो नि । हाम्रो बिचार र कामलाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त चाहियो नि । रिक्ततामा पार्टी एकता हुँदैन ।
कुन विचारबाट निर्देशित हुन्छ ? पार्टी एकीकृत हुँदा कुनै विचारबाट निर्देशित त हुन्छ । नामाकरणमा आग्रह राख्नुपर्दैन । जबज भन्ने कूरा एउटा सूत्रबद्ध भएको सिद्धान्त हो ।
पार्टी एकताका सन्दर्भमा हामी एक्काइसौं शताव्दी जनवाद भन्ने माओवादी केन्द्रको बिचारमा भएका कुरामा पनि छलफल गर्न सक्छौं । जबज र एक्काइसौं शताव्दीको जनवादका सन्दर्भमा कन्टेन्टमा के-के राख्ने उल्लेख गरौं, त्यो कन्टेन्टलाई बोक्ने नाम के हुन्छ भन्नेमा हामी पुगौंला नि ।
त्यसैले बाहिर बहस छलफल के हुन्छ अलग हो, एमालेभित्र जबजको बारेमा औपचारिक र संस्थागत ढंगले कुनै बहस छैन । जबजको प्रसंग सकियो भनेर नयाँ सिद्धान्त निर्माण गरौं भनेर पार्टीमा कसैले कुरा उठाएको छैन । @onlinekhabar